May 2010 | TechSectors
Split Big Files using WINRAR
WinRAR နှင့် အပိုင်းများ စိတ်ပိုင်းခြင်း
ဖိုရမ်မှာ HJ split နဲ့ ဖိုင် ဘယ်လိုခွဲတယ်ဆိုတာ တင်ထားတာတွေ့မိပေမယ့် Winrar နဲ့ ဖိုင်ဘယ်လိုခွဲသလို Password ဘယ်လိုခံမလဲ ဆိုတာ မတွေ့မိတာရယ် - နောက်ဒီနေ့ ဖိုရမ်ထဲဝင်ဖြစ်တော့ ကို minwai က စကားဝိုင်းထဲမှာ မေးထားတာလည်း တွေ့မိလို့ ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ကိုယ် အပိုင်းလိုက် ခွဲပစ်ချင်တဲ့ ဖိုဒါရှိတဲ့နေရာကို သွားပါ။ အောက်မှာ ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဖိုဒါတစ်ခုကို အပိုင်း ပိုင်းပြပါမယ်။ ကျွန်တော့်မှာ KznT's songs selection (2) ဖိုဒါတစ်ခု ရှိပြီး အဲ့ဖိုဒါဟာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း 66.9 ~ 70 MB ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီဖိုဒါကို အညီအမျှ အပိုင်းသုံးပိုင်း ပိုင်းချင်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ရမှာ လတ်တလော မြင်နေရတဲ့ 66.9 ~ 70 MB ဆိုတဲ့ပမာဏကို အညီအမျှ ( ၃ ) ပိုင်း အရင်ပိုင်းရမှာပါ။ 66.9 ~ 70 MB ဆိုတာကို ဖြန့်ချလိုက်ရင် အနီးစပ်ဆုံး 70000000B ဖြစ်ပါတယ်။ ( 70MB= 70*10^6 ) ပါ။ အလွယ်မှတ်ချင်ရင် နဂိုမူရင်း 70 ကို ဒီအတိုင်းထားပြီး နောက်က သုည ( ၆ ) လုံးကပ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒီလိုမျိုးပေါ့ ( 70 + 000000 )။ ဒီပမာဏ ကို ကျွန်တော်တို့တွေက သုံးပိုင်း အညီအမျှ ပိုင်းချင်တာ မို့လို့ တစ်ပိုင်းချင်းစီဆိုရင် 24MB နီးပါးဆီ ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ မူရင်းက 66.9 ~ 70 MB ဆိုတဲ့ပမာဏကို ( ၃ ) ပိုင်း အညီအမျှ ပိုင်းချင်မယ် ဆိုရင် တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ 24MB = 24000000B ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ( ၃ ) ပိုင်း မပိုင်းချင်တော့ဘူး ( ၂ ) ပိုင်းပဲ ပိုင်းတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားရင်လည်း ရပါတယ်။ 70 MB ကို (2) ပိုင်း ပိုင်းရင် 35MB ဖြစ်တာမို့လို့ တစ်ပိုင်းချင်းစီကို 35000000B ထားရင် ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု သိထားရမှာ တစ်ချက်က RAR ဆိုတဲ့ သဘောတရားက ချုံ့တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တစ်ပိုင်းချင်းစီကို ကိုယ်က 35MB ဆိုပြီး ချုံ့ခိုင်းလိုက်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ချုံ့လို့ရလာတဲ့ ပမာဏကို ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ချုံ့ခိုင်းလိုက်တဲ့ ပမာဏရဲ့ 2MB ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လျော့နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအောက်က ပုံက ကျွန်တော် 35MB နဲ့ ( ၂ ) ပိုင်း ပိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ လျော့ကျသွားတဲ့ ပမာဏကို ပြချင်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ 70 MB အပြည့်ရှိတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုကို 35 MB ဆိုပြီး ၂ ပိုင်းတည်း ပိုင်းချလိုက်တဲ့ အခါ ( ၂ ) ပိုင်း မထွက်ပဲ ကပ်သီးကပ်သပ် 2MB စာလောက်ပိုထွက်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်း ပါလာတတ်ပါတယ်။ စုစုပိုင်း ( ၃ ) ပိုင်း ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုပြဿနာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်ကတော့ ပမာဏ အပြည့်ရှိတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခု ( ဥပမာ - 70MB ) ကို ( ၂ ) ပိုင်း သို့မဟုတ် သူ့ထက်ပိုပိုင်းချင်တဲ့ အခါ သူ့ကို ခွဲချင်တဲ့ ပမာဏနဲ့ စားလို့ ရလာတဲ့ Result ကို 2MB ထပ်တိုးပြီး ခွဲပါ။ ( ဥပမာ - 70MB /2= 35 MB , 35MB+2MB= 37MB ) ဒါကြောင့် ပိုင်းရမယ့် ပမာဏက နောက်ဆုံး ရလာမယ့် Result က 70MB ရှိတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုကို အညီအမျှ ( ၂ ) ပိုင်း ပိုင်းချင်တဲ့ အခါ တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ 37MB စီရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုကျွန်တော်တို့ အရင်ဦးတည်ထားတဲ့ ( ၃ ) ပိုင်းပိုင်းတဲ့ အစီအစဉ်ကိုပဲ ပြန်သွားကြရအောင်ပါ။ 66.9 ~ 70 MB ပမာဏ ရှိတဲ့ KznT's songs selection (2) ဖိုဒါကို အညီအမျှသုံးပိုင်း ပိုင်းနိုင်ဖို့ တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ 24MB = 24000000B ပမာဏစီ ထားရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါပြီ။ နောက်ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်းချင်တဲ့ ဖိုဒါပေါ်မှာ Right-click ထောက်ပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Add to archive ... ကို သွားပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ အောက်ကပုံကို မြင်ရပြီ ဆိုရင် Split to volumes, bytes နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ခုနက တွက်ချက်ထားတဲ့ အတိုင်း 24000000 = 24 + 000000 ကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အဲတာ ပြီးလို့ OK ကို ပေးလိုက်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပမာဏကို စိတ်ပိုင်းပေးထားတ့ဲ WinRAR part1, part2 ... ဆိုတာတွေရပါပြီ။
OK ပေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ WinRAR ကနေ ကျွန်တော်တို့ စေခိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း မူရင်းဖိုဒါကို အညီအမျှ စိတ်ပိုင်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ရလာမယ့် Result ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း မြင်ရတဲ့ ပုံမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပိုင်းခိုင်းလိုက်ချိန်က 24MB ဖြစ်ပေမယ့် ပိုင်းပြီးသွားချိန်မှာ 22.8MB ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ရိုးရိုးသာမာန် RAR နဲ့ Split လုပ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ RAR သုံးပြီး Split လည်းလုပ်ရင်း Password လည်း ခံရင်း ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။
WinRAR နှင့် password ခံခြင်း
တကယ်လို့ ကိုယ် အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး ချုံ့ထားတဲ့ ဖိုဒါကို ပြန်ဖြည်တဲ့ အခါ Password တောင်းတာမျိုး ပြုလုပ်ချင်မယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်မှာ Split to volumes, bytes ရဲ့ ညာဘက် ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ Lock archive ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ပြီးရင် Advanced tab ကို သွားပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Set password ကို click ပေးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Box တစ်ခု တက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူဖော်ပြထားတဲ့ နေရာ ( ၂ ) ခုမှာ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ password ကို ပေးနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ်ပေးတဲ့ password စာလုံးပေါင်း မှန်မမှန် - error ပါမပါ ပြန်စစ်ဆေးဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ Show password မှာ click ပေးပြီး ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး ပြီးဆုံးရင် OK ကို ပေးပါ။ OK ပေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ WinRAR ကနေ ကျွန်တော်တို့ စေခိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း မူရင်းဖိုဒါကို အညီအမျှ စိတ်ပိုင်းသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ကျွန်တော်တို့ ထည့်ချင်တဲ့ Password ကိုပါ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရလာမယ့် Result ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။
ရတာတော့ ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Password တကယ်ပါလာမလာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦးမယ်။ Right click ထောက်ပြီး Extract Here ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Password တောင်းတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ WinRAR ကို အသုံးပြုပြီး အစိတ်အပိုင်းတွေ ဘယ်လိုပိုင်းမလဲ - Password ဘယ်လိုထည့်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
Paragon Partition Manager 8.0 Boot CD User's Guide
window တင်ထားသည့် hard disk ဖြစ်စေ၊ window မတင်ထားသည့် hard disk ဖြစ်စေ၊ window XP ဖြစ်စေ၊ Vista ဖြစ်စေ partition ပိုင်းဖို့၊ ခုတ်ဖို့၊ ထစ်ဖို့ အဆင်အပြေဆုံးကတော့ Paragon Partition Manager ပါဘဲ။
ကျွန်တော် အခု Paragon Partition Manager 8.0 ကို သုံးထားပါတယ်။ လက်တွေ့ လုပ်ပြဖို့ အသုံးပြုထားတဲ့ စက်၏ hard disk သည် 233GB ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ စက်သည် laptop ဖြစ်သည့်အတွက်် recovery partition တစ်ခု ပါပါတယ်။ recovery partition ကို window ပေါ်တွင် မြင်ရမည် မဟုတ်ဘဲ ထိုpartition သည် 13 GB ရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့် С: တွင် 215 GB နဲ့ recovery partition တွင် 13 GB ရှိသည်။
အဆိုပါ hard disk တွင် C: ကို 100 GB ထားပါမယ်။ နောက်ထပ် logical partition တစ်ပိုင်း ထပ်ပိုင်းပါမယ်။ ၎င်း partition size ကို 115 GB ထားပါမယ်။ နဂို recovery partition ကို မူလအတိုင်း ထားပါမယ်။ ထိုကြောင့် မူလက partition ၂ ပိုင်းသာ ရှိသော hard disk တွင် partition ၃ ပိုင်း ရှိလာမည်။
အဆင့်(၁) <Hard disk manager ထဲသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း>
CD-ROM ထဲကို Paragon Partition Manager 9.0 Professional ခွေကို ထည့်ပြီး အဆိုပါ CD မှ boot တတ်ပါမယ်။ ပုံ (၁) တွင် ပြထားသည့် အတိုင်း မြင်ရပါက normal mode ကို select လုပ်ပြီး enter နိှပ်ပါ။ ယခု အခြေအနေတွင် mouse ကို အသုံးပြုလို့ ရမည် မဟုတ်ပါ။
ပုံ (၂) တွင် ပြထားသည့် အဆင့်ရောက်ရင်တော့ mouse ကို အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ Paragon Hard disk Manager ကို double-click လုပ်ပါ။
အဆင့်(၂) <C: အား resize လုပ်ခြင်း>
နောက်ထပ် partition ပိုင်းဖို့ ဆိုသည်မှာ ရှေးဦးစွာ အဆိုပါ partition အတွက် လိုအပ်သော နေရာကို ပေးဖို့ နေရာ အလွတ်ရှိရပါမယ်။ အခု နေရာ အလွတ်မရှိပါ။ နေရာလွတ်ရရန် C: ကို resize လုပ်ပါမယ်။
ပုံ(၃) တွင် ပြထာသည့်အတိုင်း C: partition ကို right-click လုပ်ပြီး Resize/Move ကို select လုပ်ပါ။
C:ကို 100GB ပေးပါမယ်။ ထိုကြောင့် ပုံ(၄)တွင်2ပြထားသော (New size ဆိုတဲ့)နေရာတွင် 100 000 ဟု ဖြည့်ပါ။ (ကျွန်တော် အခု ရိုက်ပြထားသလို 100 နဲ့ နောက်က သုညတွေကို ခွဲမရိုက်ပါနဲ့။ တဆက်တည်း ရိုက်ပါ။) အခု ကျွန်တော်တို့ ဖြည့်ခဲ့သော နေရာ၏ နောက်တွင် Mb ဟု ရိုက်ထားသည်ကို သတိပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခွဲချင်သော partition ၏ size မှာ GB ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် MB နဲ့ GB ၏ ဆက်သွယ်ချက်မှာ 1 000MB = 1GB ဖြစ်သည်။ (အခု ပြောသည့် ဆက်သွယ်ချက်သည် အတိအကျ မဟုတ်ပါ။ ) နောက်က 000 သည် Megabytes ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရှေ့က 100 သည် Gigabytes ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
100000 ဟု ရိုက်ပြီးပါက keyboard မှ tab key ကို နိှပ်ပါ။
free space before ဆိုသည့်နေရာတွင်0ဟု ဖြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယခု အသစ်ရလာမည့် partition အပိုင်းကို C:ဆိုသည့် partition နောက်တွင် ပေါ်စေချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ free space before အောက်က slide bar ကို အဆုံးထိ ဆွဲပေးပါက အသစ်ရလာမည့် partition အပိုင်းသည် C:ဆိုသည့် partition ရှေ့တွင် ပေါ်မယ်။ slide bar ကို အလယ်တွင် ထားပါက partition ၂ ပိုင်းပေါ်လာမည်။ C: ၏ ရှေ့တွင် ၁ ပိုင်း၊ နောက်တွင် ၁ ပိုင်းဖြစ်သည်။
ပုံ(၅) တွင် ပြထားသည်အတိုင်း apply button ကို click လုပ်ပါ။
ထိုအခါ ပုံ(၆) မှာ ပြထားသည့် applying changes ဆိုသည့် dialog box ကျလာမည်။ ထိုအခါ yes button ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ ပုံ(၆)တွင် 8 pending operations လို့ ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ C:ကို move လုပ်တဲ့ operation တစ်ခုဘဲ လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့ 8 pending operations လို့ ပေါ်နေရတာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် အခုပြထားသည့် ပုံသည် ကျွန်တော် C: ကို resize လုပ်ခြင်း၊ partition အသစ် ဖန်တီးခြင်း၊ format ချခြင်း စသည် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အားလုံးပြီးတော့မှ apply button ကို နိှပ်ထားသောကြောင့် ပေါ်လာသော ပုံ ဖြစ်သည်။ ထို့သို့ operation များကို စုပြုံလုပ်ခြင်းသည် data ပျက်စီးမှုနဲ့ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးပြည့်စုံမှု မရှိခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်တော် အခု လုပ်ပြခြင်းသည် သရုပ်ပြခြင်းသည် ဖြစ်ပါတယ်။ hard disk ကို တကယ် partition ခွဲခြင်း မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ operation တစ်ခု (အဆင့် တစ်ခု)ပြီးတိုင်း apply button ကို နိှုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ပုံ(၇) ကိုကြည့်ပါ။ ရလာသော partition C: သည် 100 GB မဟုတ်ဘဲ 97.7 GB ဟုပြထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် MB နဲ့ GB ၏ အတိအကျ ဆက်သွယ်ချက်မှာ 1 024 MB = 1GB ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် C: ကို 100 GB အတိအကျ ရချင်ပါက ပုံ(၄)တွင်2ပြထားသော (New size ဆိုတဲ့)နေရာတွင် 100 000 ဟု ရိုက်ရမည့် အစား 102 400MB ဟု ဖြည့်ရမည်။
ပုံ(၅) တွင် ပြထားသည်အတိုင်း apply button ကို click လုပ်ပါ။ ထိုအခါ ပုံ(၆) မှာ ပြထားသည့် applying changes ဆိုသည့် dialog box ကျလာမည်။ ထိုအခါ yes button ကို click လုပ်ပါ။
အဆင့်(၃) <extended partition အသစ် ဖန်တီးခြင်း>
အထက်က အဆင့်တွေမှာ ကျွန်တော် မြင်သာအောင်လို့ C:ကို resize လုပ်ပြီးသောအခါ partition အသစ်ရလာသည် ဟု ရေးထားပါတယ်။ သို့သော် C: ကို resize လုပ်ပြီးသောအခါ partition အသစ်ကြီး ချက်ချင်းရလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ format မချမချင်း Hard disk က အဆိုပါ partition ကို မသိပါ။ ယခု အဆင့်ကို ဆက်မလုပ်ဘဲ Hard disk manager ထဲက ထွက်ပြီး window ပေါ်မှ အဆိုပါ hard disk ကို ကြည့်ပါက 120 GB လောက် ပျောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ C: ကို resize လုပ်ပြီး ရလာသော partition ကို format မချခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကဲ… ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆင့် (၃)ကို ဆက်ရအောင်။ free ဟု ပြနေသော hard disk ၏ partition အပိုင်းပေါ်တွင် right click လုပ်ပြီး create ကို select လုပ်ပါ။ (ပုံ ၈ ကိုကြည့်ပါ)
နောက်ထပ် အသစ်တိုးသည့် partition ကို logical partition အဖြစ်ထားချင်ပါတယ်။
logical ဘာလို့ ထားချင်ပါသလဲ?
hard disk တစ်လုံးတွင် primary ၄ ခုသာ ထားလို့ ရပါတယ်။ OS ကို primary ပေါ်တွင်သာ တင်လို့ ရပါသည်။ အဆိုပါ အချက်သည် primary ၏ အားသားချက်ဖြစ်သည်။
logical partition ပေါ်တွင် OS တင်လို့ မရပါ။ သို့သော် hard disk တစ်လုံးပေါ်တွင် logical partition များကို (၄ ခုမက) C: to Z: ခွဲလို့ ရပါတယ်။ အဆိုပါ အချက်သည် logical partition ၏ အားသားချက်ဖြစ်သည်။ (C: to Z: ဟု ပြောရခြင်းမှာ A: နဲ့ B: drive letter များကို floppy drive အတွက် ပေးထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်)
logical partition အားလုံးကို extended partition ပေါ်တွင် ထားရပါတယ်။ အဆိုပါ extended partition သည် primary partition ထဲတွင် အကျုံးဝင်သည်။ extended partition မရှိဘဲ logical partition ကို ခွဲလို့ မရပါ။
logical partition ခွဲရန် ရှေးဦးစွာ extended partition ခွဲပါမယ်။ ပုံ ၉ မှာ ပြထားသလို create partition as ဆိုသည့်နေရာတွင် extended လို့ ရွေးပါ။ New size ဆိုသည့် အောက်တွင် ရှိသော slide bar ကို အဆုံးထိဆွဲပါ။ Ok button ကို နိှပ်ပါ။
အဆင့်(၄) <logical partition အား format ချခြင်း>
extended partition လို့ သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ ပုံ ၁၀ မှာ ပြထားသလို logical partition တစ်ခု အလိုလို ရလာပါပြီ။ အထက်မှာ ပြောခဲ့အလို အဆိုပါ logical partition ကို format ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုမှသာ window က အဆိုပါ logical partition ကို သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ logical partition အပေါ်တွင် right-click နှိပ်ပြီး format partition ကို select လုပ်ပါ။
ပုံ(၁၁)မှာ ပြထားသလို NTFS ကို ရွေးပြီး OK button ကို click လုပ်ပါ။
အဆင့်(၅) <Hard disk manager မှ ထွက်ခွာခြင်း>
လုပ်ငန်းစဉ် အားလုံးပြီးဆုံးပါ၍ Hard disk manager မှ ထွက်ခွာရန် ပုံ(၁၂) တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း General menu ကို click လုပ်ပြီး exit ဆိုသည့် sub-menu ကို click လုပ်ပါ။
နောက်ထပ်ကျလာသော menu တွင် shut down ကို ရွေးချယ်ပါ။
*** အဆင့်တစ်ဆင့် ပြီးဆုံးတိုင်း မိမိ လုပ်နေသော operation ပြီးဆုံးပြီ (All operations have done) ဆိုသည့် စာတမ်း မမြင်မချင်း Esc နိှပ်ခြင်း၊ enter နှိပ်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်ချို့ operation များသည် hard disk size နဲ့ data ရှိမှု အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်ပါသည်။ ၁ နာရီ / ၂ နာရီ ကျော်အထိ ကြာတတ်ပါသည်။ မိမိ၏ စိတ်မရှည်မှုအတွက် မိမိ၏ data များ ပေးဆပ်တတ်ရသည်။
ကျွန်တော် ထပ်သတိပေးပါမယ်။ data များရှိနေသော hard disk ကို partition ပိုင်းမည်ဆိုပါက data များကို တခြားနေရာတွင် ရွေ့ပြီးမှသာ partition ပိုင်းသည့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
Credit >> ကိုဖြိုးမြင့်သိန်း ( Myanmarfamily )
Chrome and Opera Speed Test
ဟိုတစ်လောက Google ကနေပြီး သူ့ရဲ့ Product တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Google Chrome ကို Speed ဘယ်လောက်ထိ မြန်ဆန်လဲ ဆိုတာ ပြသနိုင်ဖို့ Test တစ်ခု ဖန်တီး ပြခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ သူကစမ်းသပ်နည်း ( ၃ ) မျိုးနဲ့ Google Chrome ဘယ်လောက်ထိ မြန်ကြောင်း စမ်းသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူစမ်းသပ်ပြတဲ့ထဲမှာ ပထမဆုံးနည်းက - ( ၁ ) Chrome browser နဲ့ Potato နဲ့ ဘယ်သူ ပိုမြန်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ပြတယ်။ ( ၂ ) နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ Chrome browser နဲ့ Sound wave ဘယ်သူက ပိုမြန်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ပြတယ် - နောက်ဆုံး တစ်မျိုးကတော့ ( ၃ ) Chrome browser နဲ့ Lightning ဘယ်သူ ပိုမြန်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ပြတယ် - နဲနဲ ပိုပိုသာသာလေး လုပ်ထားတာလည်း ပါတာပေါ့လေ - ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နိုင်မှုကိုတော့ ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ပြတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ကြည့်ချင်ရင် ဒီအောက်မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။
အဲ့နောက်မှာတော့ ဒီနေ့ အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ Opera အတွက် Speed Test လေး လုပ်ပြထားတာကို ကျွန်တော် ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ သူက Chrome ရဲ့ Speed Tests လုပ်တာကို တုပြီး လိုက်လုပ်ထားတာလေးပါ။ တော်တော်လေး သဘောကျမိလို့ မိသားစုဝင်တွေ ကြည့်ရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ သဘောကျဖို့ ကောင်းတယ် ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ Google Chrome ရဲ့ Speed Test ကို ကြည့်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဒီအောက်က Opera ရဲ့ Speed Test ကို ကြည့်ရင် သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စရာနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါစေ။
Best Bookmark Management Tools
တော်တော်များများ သိပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲ ကျွန်တော်ဒီနေ့ အကျယ်ချဲ့ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တွေ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲမှာ လှည့်ပတ်နေကြတယ်။ စာဖတ်တာရှိတယ်။ အခြွေကည့်တာ ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အွန်လိုင်း ဂိမ်းဆော့တာ ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သတင်းနားထောင်တာ ရှိတယ်။ ရံဖန်ရံခါ အဖြူရောင် သံစဉ်တို့လို့ ဘာတို့လို site တွေကနေ သီချင်းနားထောင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်သေးတယ်။ ဆိုရရင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးအတွက် ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ထိုင်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ လည်ပတ် သွားလာစရာ နေရာဆိုတာ တော်တော်များများကို ရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုး လှည့်ပတ်သွားလာရင်းနဲ့ တစ်ချို့ ဆိုဒ်မျိုးတွေကို ကိုယ် သဘောကျမိတာ ရှိတယ်။ အကြောင်းအရာလေးတွေလည်း စုံတယ်။ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေလည်း တော်တော်များတယ်။ ဒီလို အကြောင်းအရာ ဗဟုသုတစုံအောင် ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်မျိုးရှားတယ် ဆိုတာလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲက သိနေပြီ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီ website ရဲ့ လိပ်စာ တစ်နည်းအားဖြင့် URL ကို မှတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လို မှတ်ကြမလဲ - ?? ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ URL မှတ်နည်းတွေကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ ဆိုဒ်တွေ တွေ့ပြီ ဆိုရင် -
အခြေခံအဆင့် - ကျွန်တော့် မှတ်စု စာအုပ်ထဲမှာ ရေးပြီး မှတ်ထားတယ်။
လေ့လာခါစအဆင့် - နောက်ပိုင်း ကွန်ပြူတာ ကိုယ်ပိုင်ရှိလာတော့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ မမှတ်ဖြစ်တော့ပဲ ကွန်ပြူတာ ထဲက notepad, word file, microsoft onenote ... စတာမျိုးတွေ အသုံးပြုပြီး မှတ်ပါတယ်။
နားလည်သောအဆင့် - အဲ့နောက်တော့ ကွန်ပြူတာ ထဲက notepad, word file, microsoft onenote ... ဆိုတာမျိုးတွေထဲ မမှတ်ဖြစ်တော့ပဲ Browsers တွေမှာပါတဲ့ Bookmarks ကနေ မှတ်ပါတယ်။
အသုံးချတတ်သောအဆင့် - ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Browsers တွေမှာပါတဲ့ Bookmarks ကနေလည်း မမှတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခုကျွန်တော် အသုံးပြုဖြစ်တဲ့ bookmarking စနစ်ကတော့ web-based bookmarking စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချက်ချင်း စီရဲ့ အားသားချက် အားနည်းချက်တွေ ရှိပေမယ့် ကျွန်တော် အသေးစိတ် မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ တစ်ချက်ချင်းစီမှာ အားသာချက်ရှိတာ မှန်ပေမယ့် နောက် တစ်ချက်ရှိရာဆီ ကျွန်တော်ဘာကြောင့် ကူးပြောင်းခဲ့သလဲ - ?? နောက်ဆုံးအဆင့်က ရှေ့ဆုံး အဆင့်ထက် အားသာချက် ပိုများလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ - ကျွန်တော့် မှတ်စု စာအုပ်ထဲမှာ ရေးပြီး မှတ်ထားတယ် - ဆိုတာထက် စတုတ္ထအဆင့်ဖြစ်တဲ့ - ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Browsers တွေမှာပါတဲ့ Bookmarks ကနေလည်း မမှတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ခုကျွန်တော် အသုံးပြုဖြစ်တဲ့ bookmarking စနစ်ကတော့ web-based bookmarking စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့ အဆင့်က အားသာချက် ပိုများလို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ - ဆွေမျိုးသားချင်းက အစ web-based bookmarking စနစ်နဲ့ မရင်းနှီးကြပါဘူး။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာ ဆိုတာလည်း များသောအားဖြင့် မရှိကြသလို - အင်တာနက် ဆိုတာလည်း သူတို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ မရှိကြပါဘူး။ အင်တာနက်ကို အသုံးမပြုသူ ၊ Online နဲ့ Computer ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် web-based bookmarking စနစ်အကြောင်း သိထားဖို့ ဒီလောက် အရေးမကြီးပေမယ့် Online နဲ့ Computer ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ web-based bookmarking စနစ်နဲ့ အသုံးချပုံက သိကို သိထားသင့်ပါတယ်။
အတော်များများက URL ကို ဘာနဲ့ မှတ်မလဲ လို့ မေးလိုက်ရင် Browsers တွေမှာပါတဲ့ Bookmarks ကနေမှတ် ဒီလိုပဲ အလွယ်ပြောကြပါတယ်။ Browsers တွေမှာပါတဲ့ Bookmarks က အသုံးပြုရ လွယ်ကူတာ မှန်ပေမယ်လို့ တကယ်တမ်း Windows တစ်ခု အတင်အချ ၊ Browsers အဖြုတ်အတပ်တွေမှာ Bookmarks တွေကို Export လုပ်ထားဖို့ သတိမေ့လျော့ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကိုယ်မှတ်ထားသမျှ Bookmarks အားလုံး ဆုံးရံှုးနိုင်ပါတယ်။ မတော်လို့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ Virus ကိုယ်ခံရပြီ ဆိုရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း မှတ်ထားသမျှ ဆုံးရံှုးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဆုံးရံှုးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါတင်မက ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ မဟုတ်တဲ့ အခြားနေရာ တစ်ခုက ကွန်ပြူတာ ( ဥပမာ - အလုပ်မှ ကွန်ပြူတာ ) ကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကိုယ့် Bookmarks တွေကို access လုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
Web-based bookmarking စနစ် > သူကတော့ ကိုယ့်မှတ်သားချက် အားလုံးကို ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားမှာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကိုယ့်နှစ်သက်ရာ websites ၊ ကိုယ် သဘောကျရာ web စာမျက်နှာတွေရဲ့ လိပ်စာတွေကို အင်တာနက်ထဲမှာပဲ သိမ်ဆည်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက် အနေနဲ့ ကတော့ Windows တစ်ခု အတင်အချ ၊ Browsers အဖြုတ်အတပ်တွေမှာ Bookmarks တွေကို Export လုပ်ထားဖို့ သတိမေ့လျော့ရာကနေ Bookmarks အားလုံး ဆုံးရံှုးရခြင်း ဆိုတာကနေ လွတ်ကင်းမယ်။ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ Virus ကိုယ်ခံရလို့ ကိုယ်မှတ်ထားသမျှ Bookmarks လေးတွေ အကုန်ပါသွားတယ် ဆိုတာမျိုးကနေ လည်း လွတ်ကင်းမယ်။ မှတ်သား သိမ်းဆည်းရ လွယ်ကူမယ်။ လုံခြုံမှု ရှိမယ်။ ကိုယ် သဘောကျတဲ့ မှတ်သားထားချက်တွေကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ဝေမျှချင်မယ် ဆိုရင်လည်း အလွယ်တကူ ဝေမျှ နိုင်မယ်။ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာ မဟုတ်တဲ့ အခြား ကွန်ပြူတာ တစ်ခုကနေ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုတဲ့ အချိန်မှာ မိမိရဲ့ Bookmarks အားလုံးကို အင်တာနက်ကနေ တစ်ဆင့်ပဲ အလွယ်တကူ access လုပ်နိုင်မယ်။ Browsers မတူတော့လို့ ကိုယ့် Bookmarks ပါမလာတော့တာမျိုးတွေ - Website လိပ်စာ မှတ်မိဖို့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ရေးမှတ်ပြီး ဘယ်အင်တာနက်ဆိုင် သွားသွား ဆောင်ထားရ တာမျိုးတွေ မလိုအပ်တော့ဘူး။ ဒါဟာ Web-based bookmarking စနစ်ရဲ့ အားသာချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ထဲမှာ Web-based bookmarking စနစ်ကို အခြေခံထားပြီး မိှုလိုပေါက်အောင် များပြားလှတဲ့ Bookmark Management Tools တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေ အားလုံးထဲကမှ အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး လက်ရှိအခြေအနေနမှာ လူသုံးလည်း တော်တော်များတဲ့ Bookmark Management Tools ( ၄ ) မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သြော် ကျွန်တော် တစ်ခု ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ - သူတို့ အားလုံး Free ဖြစ်ပါတယ်။
Mozilla Weave ဆိုတာ Firefox ရဲ့ add-on တစ်ခု ဖြစ်ပြီး users တွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ web စာမျက်နှာတွေကို မှတ်သားတဲ့ အချိန်မှာ အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေဖို့ ဦးတည်ချက်ထားပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကတော့ Firefox မှာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ bookmarks, bookmark toolbar, smart location bar, tabs, browsing history, တွေနဲ့ passwords တွေအားလုံးကို Weave ကနေတစ်ဆင့် Mozilla servers နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး synchronize လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုလုပ်ဆောင်ထားခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းခဲ့တာမျိုး ဖြစ်စေ ၊ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာက ကိုယ့် အနီးအနားမှာ ရှိမနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်စေ Mozilla servers ကနေ တစ်ဆင့် ကိုယ့် Bookmarks တွေကို အချိန်မရွေး ပြန်လည် ရယူနိုင်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့ သူ့ နာမည်တစ်ခုကတော့ Foxmarks ဖြစ်ပြီး သူလည်း Web-based bookmarking စနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ Bookmark Management Tool တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အပေါ်က Weave မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုလုပ် ဆောင်တာမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် browser အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီးကွာခြားသွားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာတွေ ကွာခြားသွားလဲ ဆိုတာ အသေးစိတ် သိချင်မယ် ဆိုရင် ဒီနေရာကနေ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သူလည်း Web-based bookmarking စနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ Bookmark Management Tool တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Diigo ရဲ့ တစ်ခြား bookmarking tools တွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ သူက website တစ်ခုရဲ့ URL တစ်ခုတည်းကိုပဲ သိမ်းဆည်းပေးထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Website ရဲ့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက် တစ်ချို့ကိုပါ အတိုချုံး ဖော်ပြပေးပါတယ်။ Diigo မှာ toolbar ရှိပြီး တကယ်လို့ toolbar ကို အသုံးမပြုချင်သူ Firefox နဲ့ Internet Explorer users တွေအတွက် bookmarklet ကိုလည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော် Delicious ကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာ သုံးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Google user တစ်ယောက် ဖြစ်နေတာမို့လို့ Delicious ထက် Google bookmarks ကိုပဲ ပြောင်းသုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက Social bookmarking service မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ့ Delicious မှာ ရှိနေတဲ့ bookmarks တွေကို အခြားသူတွေအတွက် ဝေမျှ ထားလို့ ရသလို အခြားသူတွေ ဝေမျှထားတဲ့ကောင်းနိုးရာရာ bookmarks တွေကို ရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ် မှတ်သားချင်တဲ့ web စာမျက်နှာတွေကို tags နဲက အတူ ခွဲခြား မှတ်သားထားနိုင်ပြီး အခြားသူတွေဝေမျှထားတဲ့ bookmarks တွေကိုလည်း tags ကနေမှ တဆင့် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်။
သူကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Bookmark Management Tool ပါ။ ကျွန်တော် သုံးတဲ့ applications တော်တော်များများက Google နဲ့ ပတ်သတ်နေတာ မို့လို့ Google bookmarks ကို သုံးဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။ Google bookmarks ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အားဖြင့် Google Toolbar ကို ဒီနေရာကနေ သွားရောက်ပြီး Install လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ Toolbar လို့ ဆိုလိုက်ရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Install လုပ်ဆောင်ဖို့ တော်တော်ရွံ့ ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Toolbar တိုင်းက အမှန်တကယ် ဒီလောက်ထိ အသုံးဝင်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Browser မြင်ကွင်းကို နေရာ အရမ်းယူလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Toolbar တွေ အားလုံးရဲ့ ကြားမှာမှ မိသားစုဝင်တွေဟာ Google users တွေ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် Google toolbar က သုံးသင့်တဲ့ toolbar တစ်ခု အဖြစ် ကျွန်တော် အကြံပြုလိုပါတယ်။ သူ့ Toolbar မှာ ဆိုရင် Google နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Applications တွေသာ မကပဲ တစ်ခြား Sharing နဲ့ ဆိုင်တဲ့ applications တွေ၊ နောက် Sidewiki, Translate, Google Bookmarks နဲ့ တစ်ခြား အသုံးဝင်တ့ဲ shortcuts များစွာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် စက်က Google toolbar ကို နမူနာ အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Toolbar ကို လုံးဝ အသုံးမပြုချင်ဘူး ဆိုခဲ့ရင်လည်း Google bookmarks တစ်ခုတည်းကိုပဲ သုံးလို့ ရအောင် Google Bookmarks bookmarklet ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေရာကနေ သွားရောက် ရယူပါ။ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ နေ့စဉ် ကျွန်တော်ဖတ်နေကျ မြန်မာ့သတင်းဖော်ပြချက် Site တစ်ချို့ကို Web-based bookmarking စနစ်ပေါ် အခြေခံပြီး အင်တာနက်ထဲပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့ Google Bookmarks မှာ သိမ်းဆည်းထားပုံပါ။ ဘယ်ကွန်ပြူတာကိုပဲ ပြောင်းပြောင်း ၊ ဘယ်နေရာကိုပဲ ရောက်ရောက် - အင်တာနက် ရှိနေသ၍ ကိုယ့်ရဲ့ Bookmarks အားလုံး ကိုယ်နဲ့ အတူ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Browsers and their Start pages
Firefox ဖြစ်စေ - Google chrome ဖြစ်စေ - Internet explorer ဖြစ်စေ - ဘယ် Browser ကိုဖြစ်ဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ် လိုက်ချိန်မှာ ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ စတင်မြင်တွေ့ရမှာ - Browser ရဲ့ Start page ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပဲ New tab ကို ဖွင့်တဲ့အချိန် မှာလည်း အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရမှာ Browser ရဲ့ Start page ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Start page တစ်ခုရဲ့ အရေးပါမှုကို လူအတော်များများ သတိမထားမိကြပေမယ့် - ကွန်ပြူတာနဲ့ နေ့တိုင်း ထိတွေ့ပြီး အင်တာနက်မှာ သွားလာလုပ်ကိုင် နေကြမယ့် သူတွေအတွက် Start page တစ်ခုကို ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်လာအောင် ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲမလဲ - ဘယ်လို Start page မျိုးကို သုံးမလဲ ဆိုတာ - စာဖတ်သူအတွက် အသုံးပြုသင့်မယ့် Start Page တစ်ချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Browser တစ်ခု ( ဥပမာ - Firefox ဆိုကြပါစို့ ) ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ အသက်သွင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ users အတော်များများ က တင်ပြီးတဲ့အတိုင်း ပါလာတဲ့ Mozilla search ကိုပဲ start page အဖြစ်နဂိုအတိုင်း ထားရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သတိထားခဲ့မိသလောက် ၁၀၀ မှာ ၁၀ ယောက် အဲ့ဒီ့ Mozilla search ကို အသုံးပြုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်ကြပါသလဲ ?? Firefox ကိုဖွင့်တယ်။ Start page မှာတွေ့နေရတဲ့ Mozilla search ကို ကျော်ပြီး Address bar မှာ google ဆိုပြီးရိုက်တယ်။ Ctrl+enter လုပ်တယ်။ ဒါက Google user တိုင်း နေ့တိုင်းလုပ်နေကျ။ တစ်ချို့လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း - ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချင်တာ နေ့တိုင်းသုံးနေကျ Search engine တစ်ခု ( ဥပမာ - Google ) သို့တည်းမဟုတ် နေ့တိုင်းလည်ပတ် နေကျ Sites တွေကို Start page မှာ ဘာကြောင့် အရံသင့် အသုံးမပြုကြပါသလဲ။
နေ့တိုင်းလည်ပတ် နေကျ Sites တွေ ၊ နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကျ Search engine တွေကို Start page မှာထားရှိထားခြင်း အားဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိသလဲ ??
ဟုတ်ကဲ့ - အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရရင် - Address bar မှာ Cursor ချပြီး နေ့တိုင်း ရိုက်နေကျ စာလုံးတွေ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ရိုက်နေဖို့ မလိုတော့ဘူး ၊ နေ့တိုင်း ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ Sites တွေ က ဘာတွေလဲ - သူတို့တွေ နာမည်က ဘာများပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ Cursor ချပြီး တွေဝေနေဖို့ မလိုတော့ဘူး ၊ ကိုယ့်အတွက် အသိပညာ - ဗဟုသုတ - သတင်း အချက်အလက် မျှဝေပေးနေတဲ့ Sites တွေရှိရာဆီ မပျက်မကွက် လည်ပတ်စေဖို့ သတိမမေ့စေတော့ဘူး ၊ လိုအပ်ချိန်တိုင်း မှာလည်း Click တစ်ချက် ပေးယုံနဲ့ သူ့တို့တွေဆီ သွားရောက်နိုင်မယ် - စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ စာဖတ်သူရဲ့ Browsers မှာ ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သလို Start page ကို စီမံ ခန့်ခွဲဖို့ မပြင်ဆင်ရသေးဘဲ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ခုအောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် Start pages တစ်ချို့ကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Browsers တွေမှာ about:---- နဲ့စပြီး နောက်မှာ စာလုံးတစ်ချို့လိုက်တာနဲ့ about: နောက်မှာ လိုက်တဲ့ စာလုံးရဲ့ အချက် အလက်ကို လိုက်ပြီး information အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ( about: နောက်မှာ ဘယ်စာလုံးတွေ လိုက်ရင် ဘာတွေ ဖော်ပြမယ် ဆိုတာတော့ ဒီနေရာကနေ တစ်ဆင့် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ) about: နောက်မှာလိုက်တဲ့ universal code တွေထဲကမှ about:blank ဆိုတာ "Blank HTML document" တစ်ခုကို အစဉ်အမြဲ ဖော်ပြပေးတဲ့ code တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအလိုရှိရာ web စာမျက်နှာကို အလျင်အမြန် access လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း Start page တစ်ခုက မိမိအလိုမရှိတဲ့ web pages တစ်ခု ဖြစ်နေတာထက် Blank Page တစ်ခုဖြစ်နေတာ ပိုပြီး သင့်တော်တယ်မဟုတ်ပါလား။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ start page မြင်ကွင်းကို တစ်ခြား web စာမျက်နှာတွေ မြင်နေရတာထက် ရှင်းလင်းတဲ့ blank မြင်ကွင်းကို သဘောကျမယ် ဆိုရင်တော့ Firefox မှာ ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Tools > Options ကနေ ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Fav4 ကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်။ သူ့ အပြင်အဆင်လေးက ရိုးရှင်းတယ်။ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ ၊ သွားနေကျ နေရာတွေကို သူဖော်ပြထားတဲ့ icons လေးတွေကနေ click တစ်ချက်ပေးယုံနဲ့ အဆင်သင့် ရောက်နိုင်တယ်။ ပုံမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း သုံးနေကျ Facebook, Flickr, Gmail, Twitter အားလုံးကို အဆင်သင့်ရောက်နိုင်အောင် သူပြင်ဆင်ပေးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က သူပေးထားတာတွေ သဘောမကျဘူး ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း icons တစ်ခု ချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Customize ကနေ ပြင်ဆင်ယူလို့ ရသလို -
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ညာဘက် အောက်ထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ site settings ကနေ တစ်ဆင့် click ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင်လည်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို စာမျက်နှာ တစ်ခု ပေါ်လာပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ အသုံးပြုနေကျ Sites တွေရဲ့ icons တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် နမူနာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ start page ပါ။
သူ့မှာ ကန့်သတ်ချက်တော့ ရှိပါတယ်။ အဲတာက မိမိနှစ်သက်ရာ sites (4) ခုကိုပဲ ရွေးချယ်ဖို့ ခွင့်ပြုတာပါ။ တကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ Sites (4) ခုထက်မက သွားလာလေ့ ရှိသူ - Websites အဝင်အထွက်များတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ start page မှာ ဒီ့ထက် icons ပိုများများ ထားရှိနိုင်မှ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ fav4.org ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ အဲတာပါပဲ။ ကျွန်တော် ဒီ sites (4) ခုပဲ ခွင့်ပြုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့ suggest လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ထူးခြား မလာခဲ့သေးပါဘူး။
Google နဲ့ iGoogle ကလည်း start page အတွက် ထားရှိမယ် ဆိုရင် မဆိုးဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရရင် Google ကို start page အနေနဲ့ ထားတဲ့ အခါ အင်တာနက်ထဲမှာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို မိမိရှာဖွေချင်လို့ Browser ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ Address bar ကနေ Google ကိုရိုက်ခေါ်စရာမလိုပဲ Google ကို အရံသင့်တန်းမြင်ရပြီး အလိုရှိရာကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iGoogle မှာလည်း ဆိုရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ သူကတော့ Google ထက် ပိုပြီး စုံလင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ iGoogle page တစ်ခု ဖန်တီးထားပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Weather ကစလို့ ၊ ကိုယ့် Gmail ထဲက စာအဝင်အထွက်တွေ အပြင် ၊ မိမိနှစ်သက်ရာ သတင်း Websites တွေက တက်လာတဲ့ updates သတင်းတွေ အဆုံး တစ်ပြိုင်နက် iGoogle ကနေ မြင်တွေ့နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ iGoogle စာမျက်နှာတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အတွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နေရာကနေမှ တဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Users တွေ အာရုံစိုက်မိလာတဲ့ Search engine တစ်ခုပါ။ လှပတဲ့ Background ၊ သေသပ်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ သူ့ကိုများ Start page နေရာမှာ ထားမိလိုက်မယ်ဆိုရင် Bing Home Page ကို ဝင်လိုက်မိတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေ အမြဲဆန်းသစ်မှု တစ်ခုခုကို ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် မိသားစုများ ယုံနိုင်ကြပါ့မလား - ကျွန်တော်က Google user ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး။ Search engine ထဲမှာ ဆို Google ကိုပိုသဘောကျမိပေမယ့် အပြင်အဆင်နဲ့ images search မှာတော့ Bing ကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ ကျွန်တော် သဘောကျမိတာတော့ Wolfram|Alpha ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Search engine တစ်ခု အနေနဲ့ တော့ သုံးဖို့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တဲ့ အချက်အလက်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သတ်မယ် ဆိုရင်တော့ သူရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေက အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် အသေးစိတ်တာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Wolfram|Alpha နဂိုမူလပုံစံက ကျွန်တော် ဖော်ပြထားသလို မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က Wolfram|Alpha ကိုမှ Theme ပြောင်းပေးထားတာပါ။ သူ့ရဲ့ Theme ကို ပြင်ဆင်ပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားရောက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သူဖော်ပြထားတဲ့ icon ကို Toolbar ရှိရာဆီ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Drag ဆွဲယူပြီး နောက်အလိုရှိချိန်မှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နောက်တစ်ခု အကြံပြုချင်တာကတော့ "speed dial" ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Start page သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက ကိုယ်သွားရောက် လည်ပတ်နေကျ နေရာတွေကို tab bar အသစ်တစ်ခု ဖွင့်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ သွားရောက်လည်ပတ် လို့ ရအောင် Thumbnail အနေနဲ့ လှလှပပ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို Thumbnail "speed dial" တစ်ခုကို start pages မှာ စီစဉ်ထားခြင်း အားဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်နေကျ နေရာတိုင်းဆီ address bar မှာ တစ်ခုချင်းစီ typing လုပ်ပြီးသွားရောက် နေဖို့မလွယ်ပဲ အချိန်ကုန် သက်သာစွာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ webpages တွေကို အလွယ်တကူ access လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Chrome ၊ Opera နဲ့ Firefox အတွက် သက်ဆိုင်ရာအလိုက် Speed dial တွေကို ရယူနိုင်မယ့် Links တွေကို အောက်မှာ ကျွန်တော် သီးသန့်စီ ထပ်မံ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ မိမိနှစ်သက်ရာ websites ရှိရာဆီ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်ဆန်တိကျတဲ့ Start pages တွေက တဆင့် ကူးသန်းသွားလာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ....
KIS/KAV 2010 Step by Step Offline Updates Guide
Extra! Extra! Google News
MyanmarFamily ( Moderator )
Ubuntu 9.10, Karmic Koala >> Ubuntu 10.04 LTS, Luc...
Customize Your Ubuntu Applications
Birthday Presents !!